Maxay ka dhigantahay booqashada dhaxalsuge Maxamed Bin Salmaan ee Britain? – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Maxay ka dhigantahay booqashada dhaxalsuge Maxamed Bin Salmaan ee Britain?
Waa dhaxalsugaha boqortooyada Sucuudiga, mana ahan madaxa dowladaas, wuxuuna shaqada hayaa 9 bilood ee kaliya.
Balse sidaas oo ay tahay durba waxa uu kasoo shaacbaxay fagaarayaasha adduunka, wuxuuna todobaadkan booqasho ku tagayaa magaalada London, halkaas oo loogu samaynayo soo dhaweyn heerkeedu sareeyo.
Maxamed Binu Salmaan wuxuu qado sharaf la gali doonaa boqorada Ingiriiska, wuxuuna la casheyn doonaa Amiir William-ka boqortooyada.
Xiriirka ka dhaxeeya labada dal waa mid qoto dheer, balse waji cusub yeelanaya kadib markii ay Britain ka baxday midoowga Yurub.
Ra’isulwasaaraha Britain waxa ay sheegtay in Sucuudiga ay xogo sirdoon ah ay la wadaagaan dalkeeda, taas oo ay xustay in ay hawlo badan oo nabadgalyo ah lagu xaliyo.
Mid ka mid ah waxyaabaha uu Amiirka ka doonayo Britain ayaa waxaa ka mid ah in uu taageero u helo barnaamijkiisa kobcinta dhaqaalaha ee dalkiisa Sucuudiga, islamarkaasna uu maalgashadayaal badan oo caalami ah u xaqiijiyo moowqifka dowladiisa.
UK waa ay taageersantahay qorshayaasha isbadalka ee uu la yimid, gaar ahaan moowqifkiisa qunyar socodnimada diinta islaamka ee uu bilaabay hirgalintiisa.
Dumarka ayaa loo fasaxay in ay baabuurta wadi karaan, islamarkaasna aadi garaan garoomada ciyaaraha si ay usoo daawadaan.
UK waxa ay Sucuudiga ka rabtaa fursado maalgashi iyo ganacsi, gaar ahaan waxa ay Sucuudiga ka doonayaan in shirkadooda weyn ee shidaalka ee Aramco in saamiyadeeda ay u iib keento suuqa saamiyadda London.
Dadka qaarkood waxa ay ka walaacsanyihiin in isbadalka ka socda Sucuudiga in si xoog ah loogu qasbo dadka muxaafidka ah ee diintooda ku dhegan, taas oo marka dambe keenta in laga mudaaharaado.
Dublomaasiyiinta Britain waxaa la sheegay in ay sidoo kale ka walaacsanyihiin siyaasadda arrimaha dibedda ee Maxamed Salmaan, gaar ahaan muranka kala dhaxeeya Ra’isulwasaaraha Lubnaan Sacad Al Xiriiri oo inta uu shaaciyay is casilaadiisa kadibna bil kadibna uu ka laabtay.
Dadka taxliiliya siyaasada waxa ay sheegayaan in Amiirka uu ku wanaagsanyahay in uu wax bilaabo, balse uusan aqoonin sida loo damiyo xiisadaha.
Arrinta dagaalka iyo duulaanka xulufada Sucuudiga ee Yemen ayaa iyadana laga wada hadli doonaa, taas oo ay Britain mabda’ ahaan taageereyso, balse ay walaac ka qabto dhiiqada lugaha lala galay.
Waxaa la’isla jeexjeexi doonaa sidii xal loogu heli lahaa dagaalka Yemen, laguna soo afjari lahaa.
Sidoo kale arrimaha muranka Qatar iyo isbahaysiga Sucuudiga ayaa miiska lasoo saari doonaa.
UK waxa ay maanka ku haysaa heshiiska hubka Nuyuukleerka ee Iran lala galay, kaas oo Sucuudiga ay si weyn uga soo horjeedaan.
Dad u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa qorsheynaya in ay mudaaharaadyo ka dhigaan goobaha uu Amiirka tagayo, si ay u muujiyaan ku qanacsanaan la’aantooda xukuumadda Sucuudiga.
Labada dal waxaa horey u dhex maray heshiis ku kacaya £4.6 Bilyan oo Sucuudiga ay ku iibsadeen hub iyo saanad ciidan oo ay badankooda u isticmaaleen dagaalka Yemen.
← Traffic cops on their way out as IG makes changes
Nin ay ku marqaati fureyso 40 qof →